Xafiiska Walad Cabdalla: Heshiiska Is-afgarad Khasab kuma ahayn DFKMG
Xafiiska Walad Cabdalla oo Qiray inaan Heshiiska Is-afgarad Lagu Qasbin Dowlada Kumeelgaarka ah iyo Norway Shidaal ka baari doonta Xadka marka lacabiro
SomaliTalk.com | November 6, 2009
Xog laga soo xigtey saraakiisha Xafiiska Ergeyga gaarka ah ee xoghayaha guud ee Qarammada Midoobay (QM), Axmed Walad Cabdalla, ayaa sheegaysa in heshiiskii Is-afgarad ee xuduudaha badda uusan khasab ku ahayn in Soomaaliya ay saxiixdo "Arrintaan (heshiiska is-afgarad) waxaa Soomaalidu dhehi kareen hadda ma samayn karro, oo malaayiin hawlood oo kale ayaa nooyaal, ee soo laabta shan sano kaddib," sidaas waxaa yiri sarkaal ka tirsan xafiiska Walad Cabdalla.
Xafiiska Walad Cabdalla, oo sida ku cad qoraalkii ay DFKMG u gudbisay QM, ka qayb qaatay gudbinta akhbaartii ay Soomaaliya u gudbisay QM, ayaa qirsan in aysan Soomaalida khasab ku ahayn in ay Kenya la galaan heshiis Is-fagarad ku saabsan xuduudaha Badda.
Markii la weydiiyey sababta ay Norway ugu dhex jirto arrimaha la xiriira heshiiska Is-afgarad ee badda Soomaaliya iyo Kenya, waxa sarkaalka Xafiiska Axmed Walad Cabdalla ku jawaabay:
"Waxaan u malaynayaa in (Norway) ay doonayaan.... waxaan u malaynayaa in ay rabaan qalfoofka qaaradda... Waxaan u malaynayaa in ay doonayaan isku day in dalalka Afrika oo dhan ay cabbir sugan u sameeyaan xeebahooda ee qalfoofka qaaradda, kaddib markaa ay (Norway) awood u yeelato in ay Shidaal ka qoddo, sababtoo ah haddii aan cabbirka xadka la aqoon ma qodi karaan, marka xuduudaha la cabiro ayey shidaal ka baari karaan."
Markii la weydiiyey su'aal ahayd: Maadaama Soomaaliya aysan hadda haysan khubaro, isla markaasna ay Qarammada Midoobay arrimahaas fahmi karaan, miyaan la oran kari arrintan waxaa masuuliyad ka saaran tahay Qarammada Midoobay. Waxa markaas sarkaalka xafiiska Walad Cabdalla ku jawaabay: "Laakiin arrintani waxay khusaysaa Soomaalida iyaga ayaana leh go'aanka iyo waxa arrinta laga dhehayo." Markaas ayaa la weydiiyay: Waad ogtihiin waa sababta xafiiskiinu u jiro (in QM ay Soomaaliya wax u qabato). Waxa sarkaalka xafiiska Walad Cabdalla ku jawaabay: "Laakiin waxa xafiisku u jiraa - oo aan samayn karnaa - in aan ahaano broker (lataliye, dallaal, ukala dabqaade)... idiinma sheegeyno waxaad samayn lahaydeen. Soomaalida shardi kuma ahayn, mana jirto cid ku khasabtay (in ay saxiixdo heshiiska is afgarad ee Soomaaliya iyo Kenya). Arrintaan (heshiiska is-afgarad) waxaa Soomaalidu dhehi kareen hadda ma samayn karro, oo malaayiin hawlood oo kale ayaa nooyaal, ee soo laabta shan sano kaddib."
Markii la xasuusiyey in C/laahi Yuusuf uu dhahay sidaas (in hadda Soomaaliya aysan gelayn heshiiskaas), waxaa sarkaalka xafiiska Walad Cabdalla ku jawaabay: "Haa... mana ogi hadda sababta (ay DFKMG ee hadda) u sameeyeen arrintan. Waxaan u malaynayaa in aysanba markaas fahamsanayn arrinta. Ma ogi waxa meesha ku qarsoon.
Markii loo sheegay fikradda ay rumaysan yihiin jaaliyadda Soomaaliyeed in ay tahay in idinku (Xafiiska Walad Cabdalla) uu masuul ka yahay waxa dhacay? Waxaa sarkaalka ka tirsan xafiiska Walad Cabdalla ku jawaabay: "Waa ognahay in qof kasta uu annaga na eedaynayo..." Markaas ayaa la weydiiyay in arrintan laga hadlayo ay tahay go'aan weyn oo ku saabsan muran dhul iyo muran badeed, isla markaasna la xasuusiyey in arrintaas ay Qarammada Midoobay indhaha ka dadbatay. Waxaa xafiiska Axmed Walad Cabdalla ku jawaabay "ma ogi in QM ay xallin karto muranka dhulka...."
Marar badan ayaa DFKMG waxay ku andacootey in ay khasab ku ahayd in ay Kenya la saxiixato heshiis Is-faham ee la xiriira xuduudda badda, si markaas ay xogta ugu gudbisato QM, arrintaas in aan waxba ka jirin ayadoo hore ay shacabka Soomaaliyeed u ogaayeen ayaa haddana waxaa si qeexan u caddeeyay sarkaalka ka tirsan Xafiiska Walad Cabdalla.
Waxaana xusid mudan in Walad Cabdalla uu ahaa kii bilaabay ururinta xogta ay Soomaalidu u gudbisay QM, sida ku cad qormada hordhaca ah ee DFKMG u gudbisay UN April 14, 2009. Bogga 3aad ee qoraalkaas waxaa ku qoran: "October 2008 ayaa ergeyga gaarka ee xoghayaha guud ee QM u qaabilsan Soomaaliya, Axmed Walad Cabdalla, ayaa lahaa bilawga akhbaarta hordhaca ah ee muujinaysa qalfoofka qaaradda ee Soomaaliya wixii ka durugsan 200 mayl badeed."
Sidoo kale, sida uu sheegay Raysul wasaare Cumar C/rashiid ka sheegay London, Walad Cabdalla iyo Khabiir kale ayaa markii ladoortay Dowlada FKMG ee lagu shiday Jabuuti tagay Muqdisho oo ku qanciyey talaabooyinka ay qaaday. "Arrintaas horta waxay ku timid aasaaskeeda anagoo joogna ayaa waxaa noo yimid UN-ka ninka haysta Walad Cabdalla iyo nin khabiir ku ah arrimaha badda...." ayuu yiri Cumar C/rashiid oo October 28, 2009.
Xafiiskii (QM) ee lahaa asaaska heshiiskaas Is-afgarad ayaa hadda qirsan in aysanba markii hore DFKMG khasab ku ahayn in ay Is-afgaradkaas la gasho Kenya.
Maxaad kala socotaa taariikhda xafiiska QM u qaabilsan Soomaaliya:
Taariikhda Xafiiska Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qarammada Midoobay u Qaabilsan Soomaaliya
Xafiiska Ergeyga Khaaska ah ee Qarammada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya oo hadda xaruntiisu tahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaa madax xilligan ka ah Axmed Walad Cabdalla. Haddaba waxaan si kooban u guud maraynaa taariikh ahaan sidii uu ku bilowday iyo ciddii xilalka ka soo qabatay iyo shaqada xafiiskaas.
Xoghayahii Guud ee Qarammada Midoobay (January 1, 1982 � January 1, 1992) Javier P�rez de Cu�llar, oo u dhashay dalka Peru, ayaa Decmber 1991 waxa uu Soomaaliya u diray wafti xaqiiqo raadis ah si ay u soo ogaadaan xaaladda dhabta ah ee ka jirtay Soomaaliya. Waftigaas waxaa hoggaaminayey James O.C. Jonah, oo u dhashay dalka Sierra Leone. Waftigaasi waxay soo diyaariyeen warbixin ay aad uga dayriyeen xaaladda Soomaaliya. Warbixintaas ayaa la tilmaamaa in ay sabab u ahayd in Qarammada Midoobay ay Ergey ama wakiil gaar ah u magacawdo Soomaaliya.
Xoghayahii Guud ee Qarammada Midoobay (1 January 1992 � 1 January 1997) Boutros Boutros-Ghali, oo u dhashay dalka Masar, ayaa April 28, 1992 waxa uu Wakiilkiisa Gaarka ah ee Soomaaliya u magacaabay Maxamed Sahnoun, oo u dhashay dalka Algeria. Waa xilligii UNOSOM I (April 1992 - March 1993). Laakiin October 26, 1992 ayaa Sahnoun iska casilay xilkaas kaddib, sida la sheegay, markii khilaaf soo kala dhex-galay isaga xoghayaha guud QM.
Markaas ayaa waxaa Xoghayaha Guud ee QM waxa uu November 8, 1992 Ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya u magacaabay Ismat T. Kittani oo reer Ciraaq ah. Ismat Kittani waxa uu ahaa ergeyga gaarka ilaa March 1993 markaas oo ay bilaabatay UNOSOM II (March 1993 - March 1995) iyo xilligii hawlgalkii UNITAF ee "raja soo celinta Soomaaliya" (December 5, 1992 ilaa May 4, 1993).
March 9, 1993 ayaa Admiral Jonathan T. Howe, oo u dhashay Maraykanka, waxaa uu noqday Ergeyga gaarka ah ee Xoghayaha Guud u qaabilsan Soomaaliya. Waxana uu xilkaas hayey ilaa February 1994 markaas oo uu is-casilay.
Waxaa markaas (February 1994) Ergeyga Gaarka ah ee Soomaaliya si kumeel gaar ah u sii qabtay kuxigeenkii oo ahaa Lansana Kouyat�, oo dhashay dalka Guinea.
July 1, 1994 ayaa Xoghayaha guud ee Qarammada Midoobay, Boutros-Ghali, waxa uu Ergeyga Gaarka ah ee Soomaaliya u magacaabay James Victor Gbeho (oo ah reer Ghana).
March 1995 markii ay ciidamadii UNOSOM II ay ka baxeen Muqdisho, waxaa Qarammada Midoobay u muuqatay xagga nabadgelyada awgeed in aysan xafiiskeeda ergeyga gaarka ah uusan sii ahaan karin Muqdisho.
Sidaas daraadeed waxaa April 15, 1995 ay Qarammada Midoobay xafiis qaabilsan arrimaha Soomaaliya ka furtay Nairobi, xafiiskaas oo loo bixiyay United Nations Political Office for Somalia (UNPOS). Qarammada Midoobay waxay sheegtay in xafiiskaasi loogu talo galay "Horumarinta nabadda iyo dib-u-heshiisiinta ayadoo lala kulmayo hoggaamiyaasha Soomaalida, ururada bulshada iyo dalalka iyo ururada danaynaya."
Sida ku cad shabakada un-Somalia.org, xafiiska UNPOS hawshiisu waa mid siyaasadeed, waxaana garab siiya oo korka kala socda Qarammada Midoobay Waaxdeeda Arrimaha Siyaasadda ee loo soo gaabiyo DPA (Department of Political Affairs).
Waxaa xafiiskaas UNPOS madax ka ah Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qarammada Midoobay, kaas oo si dhaw ula socda xaaladda gudaha Soomaaliya iyo arrimaha la xiriira Soomaaliya. Ergeyga Khaaska ah waxa uu Xoghayaha Guud ee QM u gudbiyaa warbixinno waqtiyo ah oo kooban, waxa kale oo uu warbixino u gudbiyaa Golaha Ammaanka ee QM. Xafiiska Soomaaliya u qaabilsan QM (UNPOS) waxa uu bixiyaa hagid siyaasadeed markii loo baahdo, oo uu siinayo rugaha Qarammada Midoobay iyo hay'adaha UN-ta ee maaraynaya mucaawinada bini'aadamino iyo ururada UN-ta ee dalka Soomaaliya, sidaas waxaa qortay shabaka xafiiskaas ee Nairobi.
Waxa kale oo shabakada xafiiska UNPOS ku qoran in Xafiiskaasi uu taageero soojeedinta dalalka gobolka ee ku aadan in la horumariyo nabadda iyo dib-u-heshiisiinta Soomaaliya. Waxa kale oo shabakaasi (www.un-somalia.org) xustay in ammaanka Soomaaliya oo liita awgeed uu xafiiska UNPOS ee Qarammada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya in uu ka hawl galo Nairobi Kenya.
Dabayaaqadii September 1995 ayaa Ergeyga Soomaaliya loo maagacaabay Dr. Abdul Hamid Kabia oo u dhashay Sierra Leone, isagoo xilka hayey ilaa October 1996.
November 1996 ilaa September 1997 waxaa Ergeyga Soomaaliya ee QM hayey Felix Mosha oo u dhashay Tanzania.
October 1997 ilaa February 2002 Ergeyga Soomaaliya waxaa haa David Stephen oo u dhashay dalka Britain.
Xoghayahii Guud ee QM (1 January 1997 � 1 January 2007) Kofi Atta Annan, oo u dhashay dalka Ghana, ayaa February 25, 2002 waxa uu Ergeyga Gaarka ah ee Soomaaliya u magacaabay Winston A. Tubman oo u dhashay Liberia. Waxana uu xilkaas hayey ilaa April 2005.
Kofi Annan waxa markaas kaddib ergeygiisa khaaska ah ee Soomaaliya uu May 3, 2005 u magacaabay Fran�ois Lonseny Fall, oo u dhashay dalka Guinea, waxa uu xilkaas hayey ilaa September 2007. (Waxay ku beegan tahay xilligii ciidamada Itoobiya ay galeen Muqdisho December 28, 2006 ilaa Janauary 15, 2009).
Xoghaha Guud ee QM (ee xilka qabtay January 1, 2007) Ban Ki-moon, oo u dhashay dalka South Korean, ayaa Ergeygiisa Gaarka ah ee Soomaaliya waxa uu September 12, 2007 u magacaabay Axmed Walad Cabdalla (Ahmedou Ould-Abdallah) oo u dhashay dalka Mauritania, oo xilkaas hadda haya, isagoo ah madaxa xafiiska UNPOS.
Sida ku cad warbixinta hordhaca ah ee ka kooban 15-ka bog ee Dawladda Federaalka kumeelgaarka ah ay u gudbisatey April 14, 2009, taas oo qayb ka ah xogta lagu lifaaqay heshiiskii Is-afgarad ee xuduudaha badda ee April 7, 2009 magaalada Nairobi ku dhexmaray xukuumadda FKMG iyo Kenya, waaxaa diyaarinta (warbixintaas) ka qayb qaaday Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qarammada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya. (Eeg Bogga UN). Sidoo kale, sida kor ku xusan, ra'iisul wasaaraha DFKMG ayaa caddeeyey in asaaska heshiiska is-faham uu lahaa Ergeyga gaarka ah ee QM u qaabilsan Soomaaliya.
Shacabka Soomaaliyeed waxay si xoog leh uga soo horjeesteen Heshiiska Is-faham ee dhexmaray DFKMG iyo Kenya. Hadda xafiiska Ergeyga Gaarka ah ee QM waxa uu qirsan yahay in Heshiiskaas uusan markii horeba khasab ku ahayn DFKMG in ay gasho.
Baarlamaanka DFKMG ayaa heshiiskaas is-fahamka waxa uu ka dhigay waxba kama jiraan. Taas oo jirta ayaa xubno sare oo ka tirsan xukuumadda FKMG ay ku adkaysanayaan heshiiskaas. Waxaana muuqata in xukuumaddu aysan diidmadii heshiiska ee Baarlamaanka u gudbin Qarammada Midoobay qaybta u qaabilsan xadaynta badaha.
Maxaa hadda la gudboon DFKMG.. Akhri warbixintii hore, gaar ahaan: Maxaytahay Talaabooyinka hadda loo baahanyahay in si dag dag ah loo qaado.
Isha qaar ka mid ah xogta iyo sawirada: UN.org, Wikipedia, Google images
MOU: Tixraac bogga UN-ka
Faafin: SomaliTalk.com | November 6, 2009